ऊर्जा विकासको अवरोधक प्राधिकरण | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय ऊर्जा विकासको अवरोधक प्राधिकरण
on: ७ भाद्र २०७५, बिहीबार ०६:२५ सम्पादकीय
ऊर्जा विकासको अवरोधक प्राधिकरण
भारतबाट ल्याएको बिजुलीबाट देश उज्यालो बनेको छ । आधा बिजुली भारतबाट महँगोमा ल्याए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटाको चिन्ता नभएको देखिन्छ । ऊर्जा उत्पादन बढाउन सरकारले सङ्कटकाल नै लगाएको थियो । त्यति बेलाको कार्यनीतिले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, अहिले सरकार र प्राधिकरण यो लक्ष्यबाट पछि हटेको देखिन्छ । लगानीकर्ताले मागिरहेको ‘टेक अर पे’को नीति छाडेर ‘टेक एण्ड पे’अनुसार खरीद सम्झौता गर्नु यसको प्रमाण हो ।
प्राधिकरण प्रसारण लाइनको अभाव, नदीप्रवाहका बिजुली उत्पादनमा सीमा आदिको बहाना गर्दै निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै छ ।
विद्युत् उत्पादन गर्न धेरै लगानी चाहिन्छ । आयोजना निर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ, यसमा लगानी गरेर तत्काल लाभ लिन सकिन्न । आयोजना प्रवर्द्धकहरू प्राधिकरणले बिजुली खरीद गर्न सम्झौता गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउन सक्छन् । खरीद सम्झौताका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिँदासम्म उनीहरूको निकै ठूलो लगानी भइसकेको छ । बिजुली विक्रीको प्रत्याभूति नभएसम्म बैङ्कले ऋण पत्याउँदैनन् । बिजुली विक्रीको सुनिश्चितताका लागि प्राधिकरणले टेक अर पे (लेऊ वा तिर) का आधारमा विद्युत् खरीद सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘टेक एण्ड पे’ नीति लिएर सरकारले प्रवर्द्धकहरूलाई लगानी जुटाउने बाटो बन्द गरिदिएको छ । नयाँ आयोजना बन्ने बाटो थुनिदिएको छ । नबिक्ने बिजुलीमा कसले लगानी गर्ने ? बैङ्कले किन ऋण दिने ? त्यसैले आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकहरू समस्यामा परेका छन् । कार्ययोजनाले नदीप्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट कम र जलाशययुक्त आयोजनाबाट बढी बिजुली खरीद गर्ने नीति अख्तियार गरेको तर्कका आधारमा प्राधिकरणले ‘टेक एण्ड पे’ नीति लिएको बताउँछ ।
प्राधिकरण प्रसारण लाइनको अभाव, नदीप्रवाहका बिजुली उत्पादनमा सीमा आदिको बहाना गर्दै निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै छ । सरकार र जिम्मेवार मन्त्रीहरू विद्युत् विकासका लागि हरतरहले निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्ने अभिव्यक्ति बारम्बार दोहोर्‍याइरहन्छन् । तर, शब्दभन्न्दा व्यवहार ठूलो हो । त्यसैले सरकारले कानूनी अड्चन खोलिदिनुपर्छ । लगानी जुटाउने तगारा हटाउन सहयोग गर्नुपर्छ । तर, सरकार आफै लगानीको बाटो थुन्छ र निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्न आग्रह गर्छ । अझ विदेशी लगानीबाट विद्युत् उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्ने सपना बेचिरहेको छ । आयातित बिजुलीको भरमा स्याबासी पाएको प्राधिकरण भविष्यको माग र आपूर्तिबारे त्यति गम्भीर देखिन्न । विगतको यस्तै लापर्बाहीले अहिले राज्य जलविद्युत् पनि आयात गर्न बाध्य भएको हो ।
विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि एकलौटी अधिकार लिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् विकासका लागि होइन, यसको अवरोधका लागि काम गर्न लागिपरेजस्तो लाग्छ । प्रसारण लाइन बनाउन अनेक समस्या देखाएर आलटाल गर्छ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउन सक्दैन भने निजी उत्पादक आफैलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन केको आपत्ति ? विक्री गर्न अनुमति दिए उत्पादकहरू बजार आफै खोज्न सक्छन् पनि । सरकारकै अङ्ग वन मन्त्रालय टावर बनाउन चाहिने जमीनमा आवश्यक रूख काट्न अनुमति दिँदैन । प्राधिकरण समस्याको जालोमा जेलिन्छ तर निकास खोल्दैन । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काममा अवरोध पुर्‍याउने निकाय विदेशी हुन् ? तिनलाई सरकारले ऐन र नीतिबाट निर्देशन गर्न सक्दैन ? रोक्छ केले ? तर, विद्युत् उत्पादनका लागि आयोजनाले स्वीकृति लिन दिएको फाराम किन मन्त्रालय र विभागहरूमा अल्झिरहन्छ ? फाष्ट ट्र्याकबाट काम गर्न कसले रोकेको छ ? यी सबैको जवाफ सरकारी निकायले दिँदैन । उनीहरू प्रक्रिया र पद्धतिको भाँजो देखाएर अल्झाउन मात्रै जान्दछन् ।
प्राधिकरणले काम गर्न सकेन भनेर त्यसलाई खण्डीकरण गर्ने भनिए पनि त्यो काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको छैन । उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एकाधिकार जमाइरहन चाहन्छ प्राधिकरण र यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू । जति विद्युत्को उत्पादन बढ्छ र आपूर्ति गुणस्तरीय हुन्छ त्यति यसको उपभोग बढ्छ । आन्तरिक बजारमै विद्युत् केही दशक पर्याप्त खपत हुने देखिन्छ । तर, प्रसारण लाइन बनाउन प्राधिकरणको चासो छैन । निर्माण सम्पन्न हुन लागेका केही आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । केही आयोजनाको खेर गएको पनि थियो । यो बेथितिको अन्त्य नगरी विद्युत् विकास सम्भव छैन ।